Ndege yeLATAM inopindura mubvunzo: Chii chiri chokwadi chakawedzerwa?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege yeLATAM inopindura mubvunzo: Chii chiri chokwadi chakawedzerwa?
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • nhau • kutakura • Kufamba Wire Nhau
LATAM, boka rekutanga renhandare yendege muAmerica kushandisa nhare yedhijitari inobvumidza vafambi kuti vatarise mukwende mumaoko.
LATAM ndiro boka rekutanga renhandare yendege muAmerica kushandisa nhare yedhijitari inobvumidza vafambi kuti vatarise mukwende mumaoko. Ndiro chete boka renhandare yekuzvipa pazvinhu zvese zveApple neIOS, zvichiwedzera mukana webasa idzva.
Chishandiso chirevo uye mukwende wevapfuuri mukwende uchiri pasi pekudzokororwa panguva yekubhodhi uye inofanirwa kusangana nemipimo yemubhadharo wekabhini.
"Vatakuri vari pamwoyo pebhizimusi redu uye tiri kugara tichitsvaga nzira dzekuvandudza ruzivo rwavo rwekufamba neyakagadziriswa tekinoroji uye mhinduro dzakagadziriswa pamatanho edu edhijitari," akadaro Dirk John, Mutevedzeri weMutungamiri Dhijitari, LATAM Airlines Group. "Ichi chiitiko chitsva chikamu chekuzvipira kwedu kupa zvimwe zviitiko zvezviitiko, izvo zvinopa vafambi masimba ekudzora rwendo rwavo. Chishandiso chechokwadi chakawedzerwa chinopa vatakuri vedu gwara rinobatsira kuti vatarise pachine nguva kuti mukwende wavo wemaoko unosangana nezvinodiwa here. ”
Chishandiso chitsva ichi chinowanikwa sechikamu chekushandisa kweLATAM, iyo ine vanopfuura mamirioni matatu vashandisi pasi rese uye yaona huwandu hwevanyoreri vachikura ne3% paavhareji mwedzi wega wega kubva kukota yekutanga ya10.
Iyo sevhisi ingori imwe yemuenzaniso wekuti LATAM iri kutsvaga sei kubatanidza chinzvimbo chayo sekambani ine hunyanzvi padanho rekucheka kwezviitiko zvedigital. Zvirongwa zvichangoburwa zvinosanganisira kuunzwa kwenzvimbo dzekuzvishandira muzviteshi zvepamhepo zveLATAM uye hwaro hwerabhoritari yedhijitari yekuvandudza nekuvandudza mhinduro nyowani dzevatakuri.
Chombo chinoshanda sei?
Icho chishandiso chinogona kuwanikwa kuburikidza ne 'zvimwe' menyu yeLATAM nhare yekushandisa, uko vashandisi vanogona kusarudza sarudzo 'yakawedzera chokwadi'. Mirayiridzo inozopihwa kuyera mukwende weruoko uchishandisa bhokisi chairo.
Ndeupi mudziyo unodiwa kuwana chishandiso?
Icho chishandiso chinowanikwa kune nhare mbozha (maserura uye mapiritsi) ane Android (7.0 kana pamusoro) uye IOS (11.0 kana yakakwira) anoshanda masystem. Iyo yazvino vhezheni yeLATAM nhare mbozha inofanirwa kuiswa.